Vaovao - Ny akanjo mainty farany tsara indrindra ho an'ny fiarovana ny masoandro
Ny lamba mainty farany tsara indrindra ho an'ny fiarovana ny masoandro
Roller Blind lamba dia lasa maoderina ho fiarovana ny masoandro amin'ny indostrian'ny ankehitriny. Toy ny tombony azo avy amin'ny fampandehanana mora, tsara tarehy, maharitra ela velona ary mety tsara amin'ny toerana samihafa.
Noho ny filàna fitahirizana ny angovo sy ny fiainana manokana, ny jamba Blackout Roller dia ilaina kokoa amin'ny haingon-trano varavarankely. Izy io dia afaka manakana ny UV, tsy dia mafana ny hafanana na taratry ny tara-masoandro, noho izany dia mety mitarika tsara ny fitehirizana angovo, izany fandraisana anjara amin'ny fifehezana an-trano.
Blackout Blinds dia be mpampiasa ao amin'ny Cafe, birao, trano, lemaka, kabinetra ary faritra arivarotra. Izany dia tena mora mametraka sy soloina.
Ny volavola ETEX dia mamolavola volavola vita amin'ny lamba mainty jiro mainty izay manana kalitao avo sy fahitana tsara ho an'ny tsena ilaina.
Halehany: 200-320cm ny sakany, safidy lehibe lehibe ny mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny tsena samihafa. Ireo fitaovana dia vita amin'ny polyester 100%, mampiasa ny kalitao avo lenta sy ny simika refine amin'ny fitaovana, izany no miantoka ny halavan'ny androm-piainana sy azo antoka ho an'ny fahasalamana.
Mba hahazoana antoka ny kalitao tsara amin'ny lamba ataontsika, ny ETEX dia manamboatra ny lamba fanamainty ho an'ny fisafoana SGS amin'ny Heavy Metal, AZO Free, PVC Free.
Haingam-pandeha hazavana: satroka manga 5
Azontsika atao ihany koa ny mamokatra ny lamba lamba mainty antsika ho Waterproof, Fire Proof, anti-bakteria, anti-fugus, anti-vovoka, fanoherana ny feo, perla, volafotsy araka ny ilain'ny mpanjifa.
Ny marika FR misy antsika dia hita ao amin'ny BS 5869-1980, NFPA701
Ny blackout rehetra dia afaka DIY ihany koa amin'ny famoronana loko vaovao arak'izay ilain'ny mpanjifa, ny lokonao rehetra dia azo tanterahana amin'ny famokarana anay.
Ny Etika Blackout Roller Blind Fabric dia tsara indrindra amin'ny kapoaka sy fisaka, ity no tombony lehibe ho anay, ampiasainay ny fanafody simika, manome ny asa tsara indrindra amin'ny mihantona amin'ny lamba mainty roller.
Mifaninana ny vidin-javatra satria manao izay fara heriny tokoa izahay mba hifehezana ny vidiny isaky ny andrana ary manolotra ho an'ny mpanjifa ny vidiny mirary ho an'ny lamba lafo vidy indrindra.
Tahan'ny sakana UV: 100%, tahan'ny ny mainty: 100%
Fahazavana maivana: 45%, Fandefasana hafanana: 10%
Fametahana takelaka: asidra acrylic